Sky News တွင် Royal မင်္ဂလာဆောင်အတွက် LiveU ကိုအသုံးပြုသည် UHD / 4K Broadcast | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Frame.io သည်“ အိမ်မှလုပ်ငန်းအသွားအလာ” စီးရီးနောက်ဆုံးဖြစ်သောရုပ်ရှင်ရုံ၏အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » က Sky News, တော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင် UHD / 4K အသံလွှင့်အဘို့ LiveU အသုံးပြု
က Sky News, တော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင် UHD / 4K အသံလွှင့်အဘို့ LiveU အသုံးပြု
ကမ္ဘာတဝှမ်းတော်ဝင်စောင့်ကြည့်ပြီးသားမင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ၏မင်္ဂလာဆောင်မှတက်ဦးဆောင်သည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင်ယစ်နှင့်အတူထိုအဖြစ်အပျက်သူ့ဟာသူကြီးမားတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ က Sky News, တိုက်ရိုက် 4K ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်း, ဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဟာသူတို့ရဲ့က Sky မေးဖောက်သည်မင်္ဂလာဆောင်ကိုဆောင် ခဲ့. ချင်တယ်။ သူတို့ကတစ်ဖန်၎င်းတို့၏ fixed ဝင်ဆာ UHD OB ပြင်ပမှပြောင်းလဲနေသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံထည့်သွင်းဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်မိတ်ဖက် LiveU လှည့်။ ယင်းယူနစ်နှင့်အပိုဆောင်းထောက်ခံမှု၏ထောက်ပံ့ရေး LiveU ဗြိတိန်မိတ်ဖက်ပန်းကုံးအပေါင်းအဖေါ်များပေးခဲ့ပါသည်။
ရစ်ချတ် Pattison, သတင်းနှင့်နည်းပညာ, Sky News, ၏မန်နေဂျာက Sky က၎င်း၏က Sky မေးဖောက်သည်တစ်ခုခုပူဇော်နှင့် UHD အတွက်အဖြစ်အပျက်ကိုထုတ်လွှင့်ချင်ခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင့်ဤဖြစ်ရပ်၏အရေးပါမှုနှင့်အတွင်းကြီးမားသောအကျိုးစီးပွား "ဟုပြောသည်။ လူသိများဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် 2015 နှင့် 2017 ဗြိတိန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကဲ့သို့အထူးဖြစ်ရပ်များအတွက်, နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာငါတို့စစ်ဆင်ရေးလျှောက်လုံးကျယ်ကျယ် LiveU ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုဒါပေမယ့်လည်း။ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းမှဇာတိ UHD ဘဝတွေကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထို option ကသူတို့ကိုဝင်ဆာ၌အကြှနျုပျတို့၏ UHD OB မှ ADDED အတိမ်အနက်ကိုပေးတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
အဆိုပါတည်ဆောက်-Up နှင့်မင်္ဂလာဆောင်သူ့ဟာသူက Sky News, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်က Sky One ပေါ်တွင် simulcast ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများထံမှအဖြစ် US မှာတည်နေရာကနေ - အကွိမျမြားစှာ LiveU LU600 HEVC ခရီးဆောင်ဂီယာယူနစ်မင်္ဂလာဆောင်ရာအရပျကိုယူရှိရာဝင်ဆာ UHD OB ပြင်ပကနေအရောင်ထဲမှာရောက်စေဖို့အထူးချထားခံခဲ့ရသည်။ က Sky News, က UHD အစီအစဉ်ကိုသို့တိုက်ရိုက်ရောနှောခြင်းကိုခွင့်ပြု, အ OB router ကိုအပေါ်တစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောအချက်အချာ OB, တစ်ဦး LiveU LU4000 server ကို installed ။ အဆိုပါ LU4000 ကပ်လျက်တည်ရှိဗီဒီယိုကိုလက်ခံ 264Kp4 / 50 မှတက်မဆို HEVC / H.60 ဗီဒီယိုစီးကြောင်းကို, ခံယူပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်နှင့်ပလေးအောက်ကိုအသုံးပြုသည်။
Pattison ရုံတက်-resing ဆန့်ကျင်သကဲ့သို့ငါတို့သည်ဇာတိ UHD အတွက်ပြီးပြည့်စုံပြီးအလွန်ဒိုင်းနမစ်လွှမ်းခြုံပေးနိုငျခဲ့ကွ LiveU အသုံးပြုခြင်း "ဖြည့်စွက် HD။ ကျနော်တို့သိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်ပေးရခြင်းနှင့်သိသိသာသာအဆိုပါ OB ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးတိုးမြှင့်ပေးအပ်လာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ဆာ OB မှပြင်ပ UHD သွင်းအားစုအောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိအခြားလမ်းရိုးရှင်းစွာရှိခဲ့သည်။ အလွန်အထင်ကြီးဖြစ်သော bandwidth ကို၏4Mbps ထိ, ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ codec ကိုခွင့်ပြုခဲ့ 20K များ၏စွမ်းဆောင်ရည်။ "
အဆိုပါ HEVC Pro ကိုကဒ်နှင့်အတူ LiveU ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် LU600 ဖြေရှင်းချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ newsgathering နှင့် ကျော်လွန်. တိုက်ရိုက်လွှင့်အတွက်အဆုံးစွန်သောဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာအသေးဆုံးခရီးဆောင်ဆယ်လူလာ Bond ယူနစ်များ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီး - ထို 4K HEVC Pro ကိုကတ်နဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်း, LU600 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ဖန်တီးသူအစွန်းရောက် bandwidth ကိုထိရောက်မှုနှင့်အတူမတူနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ Eilam, ဒေသဆိုင်ရာ VP အရောင်း (EMEA), LiveU, 4K HEVC ကြီးထွားလာသောစျေးကွက်သည်နှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏အဓိကလုပ်ငန်း LU600 ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ encoding ကအဘို့အရွေးချယ်ဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက် "ဟုပြောသည်။ ဒါ့အပြင်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာ bandwidth ခံရစဉ်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ပုံရိပ်တွေ၏ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးနှစ်ခုစလုံးအားဖြင့်အတည်ပြုထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်အမှန်တကယ်အဓိကဖြစ်ရပ်ဘို့က Sky သတင်းဒီတော့ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့တော်မူကြောင်းကိုတကယ်ကျေနပ်ပါ။ "
Calrec: Craft Interview, John Hunter, A1 Mixer - ဇွန်လ 30, 2020
Globecast Americas က Chris Pulis ကို CTO အသစ်အဖြစ်ကြေငြာလိုက်သည် - ဇွန်လ 24, 2020
Rascular သည် RDeMaster Ultra-Fast Switching Upgrade ဖြင့် NDI အတွက်၎င်း၏ကိရိယာများကိုချဲ့ထွင်သည် - ဇွန်လ 24, 2020
4K ။ HEVC ဆယ်လူလာကပ်လျက်တည်ရှိ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond ဆယ်လူလာ newsgathering ထုတ်ကုန် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော သတင်း SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-05-30
ယခင်: အကြီးတန်းဆက်သွယ်ရေး Voice ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်
နောက်တစ်ခု: TVU ကွန်ယက်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားတော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်၏နှလုံးရယူပါကူညီပေး